Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Cofa apha ukuba le ngxelo yakho! » I-NASA iwonga ikhontrakthi yeZifundo zeBedrest kwi-DLR
I-NASA ikhethe i-Deutsches Zentrum fur Luft-und Raumfahrt (DLR) yaseCologne, eJamani, ukubonelela ngokusetyenziswa kwendawo yayo yokuxhasa uphando lwexesha elide lokuphumla kwebhedi.
I-49.9 yezigidi zeerandi ze-Bedrest Studies Contract iya kuxhasa uluhlu lwezifundo zokuphumla ebhedini kwiziko lenkampani e-Cologne, eJamani. Iinkonzo zisenokufuneka kwamanye amaziko eNASA, iikontraka okanye iindawo ezinokontraka onganeno, okanye amaziko omthengisi.
Ikhontrakthi ibonelela ngeenkonzo zenkxaso kwiCandelo loLawulo lweMpilo yoLuntu kunye neNtsebenzo kunye neNkqubo yoPhando loLuntu (HRP) kwi-NASA ye-Johnson Space Centre e-Houston. Nangona kunjalo, i-NASA ayilindelanga nayiphi na imfuneko yokubiza amavolontiya okufunda e-US
Uphononongo oluxhaswa yi-HRP luya kusebenzisa ukuphumla okungqongqo kwebhedi ethambekileyo njenge-analog yolunye ulungelelwaniso lwefiziyoloji olufunyanwa ngoosomajukujuku ngexesha lokubhabha. Uphando lujolise ekuqondeni ngcono kunye nokuvavanya imilinganiselo yokuchasana nemingcipheko ehambelana nemishini ye-spaceflight yexesha elide kuquka ne-International Space Station, i-Artemis kunye neenkqubo ze-Gateway.
"Imixholo ephambili yophando kulo nyaka yindlela abasebenzi abasebenza ngayo xa besebenza ngokuzimeleyo kuLawulo lweMishini kunye nenye inkxaso esekwe eMhlabeni kunye nokusebenza kweenkqubo ezahlukeneyo zokuxhasa ezi ntlobo zemisebenzi yokuzimela," utshilo uBrandon Vessey, isazinzulu sophando. imisebenzi kunye nokudityaniswa ngaphakathi HRP. "Iziphumo eziphuma kwezi zifundo ziya kunceda ukwazisa ukuba iNASA iceba njani uphononongo lwexesha elizayo xa abasebenzi bakasomajukujuku beya kufuneka basebenze ngokuzimeleyo eMhlabeni kunokuba besenza kwimishini yeSikhululo saMajukujuku saMazwe ngaMazwe kumjikelo ophantsi woMhlaba."
Ikhontrakthi engapheliyo yonikezelo/yexabiso elingenasiphelo kunye ne-firm, i-fixed-price task orders, iqala ngoNovemba 23, 2021, kwaye idlulela kwi-Dec. 31, 2025, kungekho xesha lokungena.